नेपाल आज | पाएल्सले पिरोलिएकी रत्न, राजकीय ठांटदेखि मेहन्द्र मञ्जिलको एक्लोबास सम्म
मेरो परिवार मेरो कथा समाचार
पाएल्सले पिरोलिएकी रत्न, राजकीय ठांटदेखि मेहन्द्र मञ्जिलको एक्लोबास सम्म
बुधबार, ०८ असार २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज(SS)
पूर्वबडामहारानी रत्न महेन्द्रजस्तो सक्रिय राजाकी कान्छी पत्नी हुन् । उनकी दिदी इन्द्र राज्यलक्ष्मीको निधन भएपछि राजा महेन्द्रले आफ्नै सालीसंग विहे गरेका थिए । राजा त्रिभुवन छोराको दास्रो विहे राणा परिवारसंग नहोस् भन्ने चाहन्थे । राणाकाल सकिएको सन्दर्भमा उनी नयां घरनासंग सम्बन्ध बढाउन चाहन्थे । राजा त्रिभुवनले रत्नसंग विहे गर्नेभए युवराज त्याग्नुपर्ने सर्त राखे । महेन्द्रले युवराजबाट राजिनामा दिन राजी भए । महेन्द्रले आफ्नो अवस्था विपी कोइरालालाई कहे । विपीले राजा त्रिभुवनसंग प्रेम र विवाह व्यक्तिको निजी कुरा भनेर अर्थाए । विपीको आत्मवृत्तान्तमा त्यसपछि राजा त्रिभुवन विदेश गएको र त्रिभुवनको अनुपस्थितिमा युवराज महेन्द्रले सालीसंग विहे गरेको प्रसंग छ ।महेन्द्रको जल्दोबल्दो राजकीय शासन हेरेकी रत्नले सायदै कहिल्यै सोचेकी थिइन् नेपालको शक्तिशाली राजतन्त्र आफ्नै जीबनकालमा समाप्त हुनेछ ।
२०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी छाडेर नागार्जुन जाने भए । तर, रत्नको मन दरबारमै अडियो । कारण महेन्द्रले रत्नका लागि भनेर आफ्नै नाममा मञ्जिल बनाइदिएका थिए । महेन्द्र मञ्जिलमै जीबन बिताउने रत्नले इच्छा व्यक्त गरिन् । ज्ञानेन्द्रले आफ्नी आमाको इच्छा सरकारसमक्ष विसाए । सरकारले सुनिदियो । त्यसयता रत्न महेन्द्र मञ्जिलमा र पूर्वराजपरिवारका सदस्य कहिले नागार्जुन त कहिले निर्मल निवास महाराजगंजमा बस्ने गर्छन ।
पायल्सकी पीडित रत्न बिहीबार फिटिफिटी परिन् । त्यसपछिको घटनाक्रम जनआश्था साप्ताहिकले खुलाशा गरेको छ । बिहीबार विहान पूर्वयुवराज्ञी हिमानी बच्चाहरुलाई स्कुल पठाएर भान्सा छिरिन् । ससुरा (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र)का लागि नुनमसला नियन्त्रित खानाबारे भान्सेसंग उनी कुरा गर्दै थिइन् । ठीक त्यहीबेला मोबाइलमा घण्टी बज्यो, नारायणहिटीबाट । छोटो कुराकानी सकिएपछि ‘ओ माइ गड’ भन्दै ससुरा भएतिर दौडिइन्, हस्याङफस्याङ गर्दै ।
‘मुमालाई साह्रै भयो रे.....!’ ब्रेकफाष्टपछि आराम गरेर बसेका ज्ञानेन्द्रपनि जर्याकजुरुक उठे । १० मिनेटभित्र ज्ञानेन्द्र, हिमानीसहित चारपांच जनाको यात्रा निर्मल निवासबाट नारायणहिटीतिर शुरु भयो । हुनपनि, नारायणहिटीस्थित महेन्द्र मञ्जिलमा रत्न फट्याक फट्याक भइसकेकी थिइन् । यसो भयो कि उसो भयो भन्ने अनुमान गर्दै ढोके, बगैंचे र सुसारेहरु सामान्य अवस्थामा ल्याउन प्रयत्नरत थिए । तर, हिमानीले रत्नको हात समाइन् र आफ्नो गाडीमा हालिन् ।
उनैले नर्भिक अस्पताल लैजाने भनेबमोजिम रत्न त्यहां भर्ना भइन् । उमेर भएकाहरुलाई यतिसाह्रो फट्याकफट्याक नबनाउने, तर उमेर ढल्किएका बृद्धबृद्धालाई साह्रै बनाउने रहेछ पाएल्सले । रत्न त्यही रोगले थलिएकी थिइन । विहान ११ बजे नर्मिकमा भर्ना भएकी रत्नलाई कुर्नका लागि ज्ञानेन्द्र, पत्नी कोमल हिमानीहरु आफै बसे । औषधी ल्याउने, बिल मिलाउने जस्ता काममा हिमानी सक्रिय थिइन । चिकित्सकको अप्रेसन गर्ने बताए ।
हिमानीले वृढाअवस्थालाई ख्याल गरेर अप्रेसनको विकल्पबारे चिकित्सकसंग सल्लाह गरिन । तर कसैले मानेनन् । यसपछि उनकै रोजाई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत गाइनोलोजिष्ट डा. पल स्वाबाट अपरेशन गराउने सहमती भयो । डा. पलले तत्कालै आफ्नो चिकित्सक टोली सहित नर्भिक पुगिन र उनैले दिनभर पेट खाली राख्न लगाइन सांझ ६ बजे अप्रेसनको समय तय गरिन । सामान्यतया नर्भिकले अप्रेसन गरेका विरामीलाई केहि समय अस्पतालमै राख्छ । तर हिमानीको अनुरोधमा उनी रानी नौ बजे डिस्चार्ज भइन् । त्यहांको कारोबार सबै हिमानीले नै मिलाएकी थिइन ।
महेन्द्र मञ्जिलमा बस्ने रत्न एक्ली हैनन । उनीसंग एक दर्जन बढी नाती बज्यै ढोके बगैचे सुसरे छन् । रत्न सहित तिनीहरुको सरदपानीको इन्तजाम निर्मल निवासले गर्छ । एक वर्ष अघि फोटो र नागरिकता नभएका कारण नेपाल खानेपानीले लाइन काटिदिएको छ । यसपछि दैनिक एक ट्यांकर पानी किनेर चलाउने गरेकी छन् । यो खर्च पनि निर्मल निवासले नै व्यहोर्छ । उनी दिनमा एकछाक मात्र खाना खाने गर्छिन । बांकी समय दुघ र फलफुल लिने गरेकी छन् । निर्मल निवासबाट दैनिक पांच लिटर दुध जान्छ । ति गाई निर्मल निवासमै पालिएका छन् । उनका लागि फलफुल लिएर नेवार सांहुहरु दैनिक पुग्छन् र पैसा लिएर फर्कन्छन् । महेन्द्र मञ्जिल भित्र चारवटा टेलिकमका ल्याण्डलाइन फोनहरु चालु अवस्थामा रहेका छन् । ती मध्ये दुई वटा नारायणहिटी दरबारको नाममा दर्ता रहेका छन् । पहिले त्यो टेलिकमले त्यहांबाट जतिसुकै फोन गरेपनि बील पठाउंदैनथ्यो । तर अहिले न्यूनतम समय गुज्रिएपछि आफै लाइन काट्ने गरेको छ । रत्नले दिने पैसाले लाईन खुलाउने गरिन्छ । बांकी दुई टेलिफोन मध्ये एक निजी सचिव शम्भु अधिकारीका नाममा छ र त्यो पैसा पनि उनले आफै तिर्छन । अर्को फोन इन्टरनेट चलाउन उपयोग हुन्छ र त्यो पनि अर्को कर्मचारीको नाममा नै रहेको छ ।